Maka ndị na-achọ akwụkwọ nke usoro Kadin (Nwanyị ma ọ bụ Ike nke Nwanyị) | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ ndị dị ugbu a | | Akwụkwọ, ọtụtụ
Kadin, makwaara na mba dị iche iche dịka Nwaanyị, Ike Nwanyi dabere na usoro Nwanyi, ndu m maka umu m site n’aka Yuji Sakamoto. O nweela ọganiihu mba ụwa niile, agbasaara na mba 65.
Ihe ngosipụta nke anyị hụla kemgbe oge ụfọdụ bụ ire ere akwụkwọ site na usoro na fim dị oke egwu. Mgbe ụfọdụ ha bụ akwụkwọ ọgụgụ nke ha hiwere isi na ya na ndị ọzọ ha bụ akwụkwọ a na-ebipụta ma televishọn ma ọ bụ ihe nkiri mechara nke ọma. Otutu puku mmadu choro igu akwukwo banyere usoro ha masiri ha.
Anyị ahụla nke a n'oge na-adịbeghị anya Eziokwu ma ọ bụ ndị nwere ihe ịga nke ọma Egwuregwu ocheeze.
Ya mere, okwu banyere Nwanyị (Kadin) dị oke mkpa, ebe ọ bụ na usoro a kwụsịrị na Bahar bipụtara akwụkwọ na-aga nke ọma banyere ndụ ya. Akwụkwọ ahụ kwuru n'ezie ihe anyị hụworo n'usoro.
Ma ọ dị nwute na ị na-eche, akwụkwọ ahụ ha nwere ike ire anaghị adị. Enweghị akwụkwọ e bipụtara na usoro, n'agbanyeghị na o nwere ihe niile iji nwee ihe ịga nke ọma.
1 Usoro usoro (nwere ndị na-emebi ihe)
3.1 Ndị isi ihe nkiri
3.2 Trada egwu
Usoro usoro (nwere ndị na-emebi ihe)
Bahar Sismeli, bụ nne, nwanyị di ya nwụrụ, nwere ụmụ abụọ na-aga otu n'ime obodo ndị kacha daa ogbenye na Turkey, na-arịa ajọ ọrịa. Nne ya gbahapụrụ ya mgbe ọ dị obere na
Site na ebe a anyị ga-ahụ ndụ ya ụbọchị na aja ọ na-achụrụ ụmụ ya nke ga-eduga ya n'ọnọdụ ndị jọgburu onwe ha na nke na-enweghị atụ, nke ga-ejikọta nnukwu ihe nkiri na mmetụ ọchị.
Nloghachi nke di ya, onye o kwenyere na ọ nwụọla, ma onye lụrụ nwanyị ma nwee ụmụ abụọ. Kedu, n'amaghị ama, ọ na-abanye na crosshairs nke ìgwè dị iche iche nke ndị omempụ, na-adịwanye ike. Ndozi ahụ ya na nne ya nwere, na ụdị nwanne ya nwanyị, Sirin, onye oke njọ na onye na-akpata nsogbu niile na ndụ ya.
Bahar, ga - enwe otutu ihunanya n’ebe nwoke a no, ga - enwe nsogbu, ga - ebighachi ezin’ulo nke ndi enyi ole na ole gbara ya gburugburu na ihe ndi ozo, ya na onodu ya di egwu ma ghaa buru onye ihe ịga nke oma site n’inye akwukwo akwụkwọ banyere ndụ ya.
Akwụkwọ nke nwute anyị enweghị ike ịchọta, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ịhụ ya na ụdị ọdịdị ya na usoro
Echiche dị iche iche na-ebute ihe niile. Ihe kacha mkpa, bụ ike ụmụ nwanyị, karịsịa na mba dị ka Turkey ebe machismo dị karịa karịa na mba ndị ọzọ dị n'ebe ọdịda anyanwụ. Akụkọ Bahar bụ nke nwanyị na-ebute onwe ya, n'agbanyeghị ọnyà na aghụghọ niile ha na-etinye ya, n'adabereghị. N'ọtụtụ isi, anyị na-ahụ ntụaka megide mmejọ, na ihu ọma nha anya na nnwere onwe.
Achọghị m ka ụmụ m tolite na-ele nwoke iti ụmụ nwanyị anya maka ihe ọ bụla, achọghị m ka ụmụ nwoke na-akụ ụmụ nwanyị ihe ọ bụla
Ọ bụ usoro Turkish kacha ele anya n'ụwa, agbasawo na mba 65. Site na oge 3 na isi 81, ọ bụ onye mmeri nke Tokyo Drama Awards na 2018. Dịka anyị kwuru, ọ dabere na usoro ọzọ, Nwanyị si Yuji Sakamoto
Ndị isi ihe nkiri
Özge Özpirinçci dị ka Bahar Çesmeli (isi protagonist)
Seray Kaya dị ka Şirin Sarıkadı (nwanne nwanne Bahar na ọjọọ, mmụọ ọjọọ)
Kubra Suzgun dị ka Nisan Çesmeli (ada Bahar)
Ali Semi Sefil dị ka Doruk Çesmeli (ọdụdụ nwa Bahar)
Feyyaz Duman dị ka Arif Kara (onye nwe ụlọ na ịhụnanya maka Bahar, onye ga - abụ onye ibe ya)
Serif Erol dị ka Enver Sarikadi (nna nna Bahar na nna Sirin)
Gökçe Eyüboglu dị ka Ceyda (ezigbo enyi Bahar ga-eso ya na usoro a)
Bennu Yildirimlar dị ka Hatice Sarikadi (nne Bahar)
Caner Cindoruk dị ka Sarp Çesmeli (di Bahar)
Ọ bụ akụkụ dị oke mkpa nke usoro ahụ. Site na egwu dị egwu na amata nke ọma ha na-enye anyị ọnọdụ. Ozugbo ị maara mgbe ọdachi ma ọ bụ ọnọdụ na-atọ ọchị ga-eme, ọ bụ naanị ederede 2 ka itinye onwe gị na esemokwu. Ndị rụpụtara ihe a bụ Cem Tuncer na Ercüment Orkut, abụọ n'ime ndị na-ede egwú kacha mma na Turkey.
A na-ejikọta agwa ọ bụla na abụ olu ụtọ dị iche iche maka ihe nkiri ndị ọ na-eji kpakpando. Ọ bụrụ n’ịhụnanya bara n’anya, ị nwere ike ịchọta ụda ụda ya ebe a.
Anyị Anyị ga-elebara anya iji gwa gị ma ọ bụrụ na ha ebipụta ya. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na anyị na-ekwu maka akwụkwọ akụkọ nke usoro kachasị amasị gị, hapụ anyị ikwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Akwụkwọ nke usoro Kadin, nke a maara dị ka Mujer ma ọ bụ Fuerza de Mujer